Mid kamid ah Ragii lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Xamdi oo laga qabtay Deegaanka Cadaado. | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Mid kamid ah Ragii lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Xamdi oo laga...
Mid kamid ah Ragii lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Xamdi oo laga qabtay Deegaanka Cadaado.
Ciidanka Booliiska Dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa la sheegay in xalay xilli dambe howlgal ay ka fuliyeen magaalada Cadaado ku soo qabteen mid ka mid ah rag lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Muqdisho loogu geystay Xamdi Maxamed Faarax.
Sakiya Xuseen Axmed Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa sheegtay in Ninkaasi oo lagu Magacaabo Maxamed Ibrahim Cismaan oo 24 jir ah, kuna dhashay Muqdisho laguna tuhmaayo inuu ku lug lahaa kiiska marxuumad Xamdi Maxamed Faarax kana baxsaday magaalada Xamar falka ka dib.
“Ciidanka Boliiska Galmudug ayaa xalay xili dambe howlgal ay ka fuliyeen magaalada Cadaado ku soo qabtay eedeeysane Maxamed Ibrahim Cismaan, 24 jir ah, ku dhashay Muqdisho laguna tuhmaayo inuu ku lug lahaa kiiska marxuumad Xamdi Maxamed Faarax kana baxsaday magaalada Xamar falka kadib” ayay tiri Taliye Sakiya.
Waxay u mahad celisay Ciidamada iyo Shacabka Maamulka Galmudug oo ay sheegtay inay si wadajir ah uga Shaqeeyeen sidii gacanta loogu so dhigi lahaa eedeeysane Maxamed Ibrahim Cismaan oo baxsad ahaa.
Dhanka kale Booliska Soomaaliya ayaa shalay sheegay in 11 Ruux ay u hayaan kiiska kufsiga iyo dilka ee dhibbane Xamdi, isla markaana baritaano ay ku hayaan dadkaasi.
fanaaniin iyo Jilaayaal caan ah oo shaaciyay inay joojinayaan isticmaalka Facebook.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug oo sigaar ah ugu wadahadlay Xaaladda Siyaasadeed ee dalka.
Guddoomiye Baarlamaanka Soomaaliya oo kulan la yeeshay Madaxweyne Waare iyo Lafta-Gareen.
XOG: Kheyre oo diiday casuumaad uu u soo diray FARMAAJO, Hadal Cajiib ahna ku yiri
XOG: Yaa la wareegay shaqadii W/Arrimaha Gudaha & Xog laga helay Wasiirkii la waayay?
Mid kamid ah Ragii lagu eedeeyay kufsigii iyo dilkii Xamdi oo...
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug oo sigaar ah ugu wadahadlay Xaaladda Siyaasadeed...